February 20, 2020 – ျမန္မာသတင္းစံု
ကွယ်လွန်ဆုံးပါးသွားပြီဖြစ်တဲ့ မင်းသမီးကြီးဒေါ်ခင်မေသက်ကွယ်လွန်ဆုံးပါးသွားပြီဖြစ်တဲ့ မင်းသမီးကြီးဒေါ်ခင်မေသက်
ပရိသတ္ႀကီးေရ.. အႏုပညာေလာကမွာ ပီျပင္တဲ့သ႐ုပ္ေဆာင္ပိုင္ႏိုင္မႈေတြနဲ႔ ပရိသတ္ေတြကို ရသအမ်ိဳးမ်ိဳးေပးစြမ္းႏိုင္ခဲ့တဲ့ အႏုပညာရွင္ေတြထဲမွာ ဝါရင့္အႏုပညာရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္မင္းသမီးႀကီး ေဒၚခင္ေမသက္ကလည္း အပါအဝင္ပါပဲ..။ဆယ္စုႏွစ္ေတြမက အႏုပညာအလုပ္ေတြလုပ္ေဆာင္ခဲ့ကာ အသက္(၈၉)ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္တဲ့ မင္းသမီးႀကီး ေဒၚခင္ေမသက္ကေတာ့ မၾကာခင္အခ်ိန္ကအထိ လည္ပင္းကင္ဆာခံစားခဲ့ရၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ေဖေဖာ္ဝါရီ (၁၉) ရက္ေန႔ကပဲ ကြယ္လြန္ဆုံးပါးသြားၿပီ ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္..။ ေဖေဖာ္ဝါရီ(၁၉)ရက္ေန႔ ည(၈:၀၅)အခ်ိန္က ရန္ကုန္ေဆး႐ုံႀကီးမွာ ကြယ္လြန္သြားခဲ့တာျဖစ္ၿပီး မိသားစုနဲ႔အတူ ပရိသတ္ေတြကလည္း သူတို႔ခ်စ္ခင္ရတဲ့ အႏုပညာရွင္တစ္ဦး ကြယ္လြန္သြားတဲ့အတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေနၾကပါတယ္ေနာ္..။ေမေမႀကီး ေဒၚခင္ေမသက္ရဲ႕ ေနာက္ဆုံးဈာပနအခမ္းအနားေလးကိုေတာ့ လာမယ့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ(၂၃)ရက္ တနဂၤေႏြေန႔ ေန႔လည္(၂)နာရီအခ်ိန္မွာ ေရေဝးသုႆာန္ကို ပို႔ေဆာင္မီးသၿဂိဳလ္ကာ ဈာပနာေလးကို ျပဳလုပ္မွာပါ..။ Read more
ဆိုင်ကယ်နှင့် ဘင်္ဂါလီ တစ်ဦးလျှင်(၅)သိန်းကျပ်ဖြင့် ပို့ဆောင်သူအား ဖမ်းဆီးရမိ ဒီလိုလူမျိုးတွေရှိနေလို့
ဆိုင္ကယ္ ႏွင့္ ဘဂၤါလီ/အစၥလာမ္ တစ္ဦးလွ်င္(၅)သိန္းက်ပ္ျဖင့္ ပို႔ေဆာင္သူအား ဖမ္းဆီးရမိ ေဖေဖာ္ရီလ. ၂၀. ၂၀၂၀ (၁၉ ၂ ၂၀၂၀)ရက္ေန႔(၂၀၄၅)အခ်ိန္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခ႐ိုင္ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ဥသွ်စ္ပင္နယ္ရဲစခန္းအပိုင္ က်ီးပင္ေက်း႐ြာအုပ္စု က်ီးပင္ရဲကင္းေရွ႕ ပုသိမ္ – မုံ႐ြာကားလမ္း မိုင္တိုင္အမွတ္ ၁၄၆/၀ ႏွင့္ ၁၄၆/၁ အၾကားတြင္ ရဲကင္းမႉး ဒုရဲအုပ္ မ်ိဳးေဇာ္ ရဲတပ္ၾကပ္ သိန္းေဇာ္ ရဲတပ္သား သာထူးေမာင္ ရဲတပ္သား တင္ကိုကို ရဲတပ္သား ေအာင္သက္ပိုင္ တို႔အဖြဲ႕သည္ သက္ေသ က်ီးပင္အုပ္စု Read more
ရွေပေါက္ကံက သက်ငယ်မဒိမ်းမှုအတွက် မှန်မှန်ကန်ကန်အမိန့်ချပေးခဲ့လို့ တာဝန်ရှိသူတွေကို ကျေးဇူးတင်စကားဆိုခဲ့တဲ့ အေသင်ချိုဆွေ
ပြီခဲ့တဲ့ လအနည်းငယ်လောက်က လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာထက်မျာ ဟိုးလေးတစ်ကျော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရွှေပေါက္ကံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ သက်ငယ်မဒိမ်းမှုအတွက် ဒီနေ့မှာပဲကျူးလွန်ခဲ့သူ တရားခံ ကိုရင်ကြီးကို ထောင်ဒဏ်တစ်သက် အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအမှုဖြစ်နေစဉ်ကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာ အဆိုတော်အေသင်ချိုဆွေတို့က ကျူးလွန်ခံရသူ သမီးလေးဘက်ကနေပြီး အပြည့်အဝဝန်းရံပေးခဲ့ကြပါသေးတယ်။ အေသင်ချိုဆွေကတော့ အခုလို သမီးလေးရဲ့ အမှုမှာ ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ တရားခံကို ထိုက်သင့်တဲ့ အပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ပေးခဲ့ပြီး မှန်မှန်ကန်ကန် ဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့တဲ့ တာဝန်ရှိလူကြီးတွေကို ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း ကိုအခုလိုပဲ ဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ်။“တာဝန်ရှိတရားသူကြီးမင်းမှစပြီး ရှေ့နေများ သက်ဆိုင်ရာအရာရှိများအားလုံးကို သမီးလေးမိသားစုကိုယ်စား ကျွန်မ အေသင်ချိုဆွေမှ အထူးအထူးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရစေရှင်”ဆိုပြီးသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေဖော်ပြထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုတော်လိမ္မော်သီးနဲ့ အဆိုတော်ချမ်းချမ်းတို့အပါအဝင် အမှန်တရားကို မြတ်နိုးကြတဲ့ Read more
ကြွေရလောက်တဲ့ အပြုံးလေးတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကို ပြုစားလိုက်တဲ့ အိချောပို ရုပ်သံ
ပရိသတ်တွေအားပေးမှုတွေနဲ့ အနုပညာလမ်းကြောင်းမှာ အောင်မြင်မှုတွေကို လက်ရှိအချိန်ထိသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ မင်းသမီးလေး အိချောပိုကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူတစ်ယောက်ပါ။ လက်ရှိမှာတော့ အနုပညာအလုပ်တွေကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရင်း ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေရိုက်နေတာကိုလည်း မြင်တွေ့ရမှာပါ။ လက်ရှိ မင်းသား မြင့်မြတ်နဲ့အတူ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ပလေယာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကလည်း ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုတွေကိုများစွာရရှိထားပြီး အသွင်အသစ်နဲ့ မင်းသမီးချောလေး အိချောပိုရဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ လုံးကြီးပေါက်လှခန္ဓာကိုယ်လေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့် ပုရိသတွေရဲ့ အာရုံစိုက်ခံရတဲ့ မင်းသမီးလေးဖြစ်သလို သရုပ်ဆောင်ကောင်းသူတစ်ယောက်မို့ အမာခံပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုတွေရရှိထားသူတစ်ယောက်ပါ။ အခုလည်း ပရိသတ်တွေရဲ့ အသည်းတွေကို ကလိကလိဖြစ်အောင် အပြုံးလေးတွေပရိသတ်တွေကို Read more
စာရေးမက နာမည်စာရင်းသွင်းဖို့မေ့ခဲ့လို့ တစ်နှစ်ကျသွားခဲ့ရတဲ့ ဒဂုံတက္ကသိုလ်မှ ကျောင်းသူတစ်ဦးရဲ့အဖြစ်
ဒဂုံတကၠသိုလ္ အေဝးသင္ဌာနမွ စာေရးမမ်ား သိေစလို… ​”assignment တင္ထားတာလုံးဝမရွိလို႔ က်တာပါ”ဒီတစ္ခြန္းနဲ႔တင္ က်မ ၿငိမ္ခံလိုက္ရပါေတာ့မယ္ ။ တကယ္တမ္းက တင္ထားတာအတိအက်ရွိပါတယ္ (လူကိုယ္တိုင္တင္ခဲ့တာပါ)ပထမဆုံး assignment ကိုကိုယ္တိုင္စေရးဖူးတာမို႔လို႔စာစဥ္ သြားထပ္တဲ့ေန႔ ကပဲ အဲ့ဒီက လက္ခံေနသူမ်ားကိုေမးျမန္း ခဲ့ပါတယ္(ခုံနံပါတ္ ေရးနည္း/module ,etc.) (ေလသံခ်ိဳခ်ိဳသာသာနဲ႔ မဟုတ္ဖူးေနာ္..ကိုယ့္မွာ ကိုယ့္ပိုက္ဆံနဲ႔ကိုယ္ေက်ာင္းတက္ၿပီး စာေရးေငါက္ခံ ခဲ့ရတာမ်ိဳး)သူတို႔ ေျပာပုံအတိုင္းလုပ္စရာရွိတာလုပ္ၿပီး ထပ္တယ္.. သူတို႔ စစ္ေဆးခဲ့တယ္ ၊”ရၿပီ ထားခဲ့ေတာ့” လို႔ တစ္ခြန္းပဲ ေျပာခဲ့တယ္ ၊ျမင္ရသေလာက္ကေတာ့ သူတို႔ တစ္စုံတစ္ခုကို ေရးၿပီး Read more
မွေးနေ့အလှူအဖြစ် ရွာလုံးကျွတ် မီးခိုးတိတ် ထမင်းကျွေးပြီး ပိုက်ဆံတွေကြဲခဲ့တဲ့ ဖြူဖြူထွေးရဲ့ ဗီဒီယို
မလှိုင်နယ်သူလေးဖြူဖြူထွေးတစ်ယောက် သူမရဲ့အသက် (၂၁) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လေးမှာ တစ်ရွာလုံးကို မီးခိုးတိတ်အလှူပွဲလုပ်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နေအိမ်မှာ သံဃာတော်တွေကို ဆွမ်း၊ ဝတ္ထုကပ်လှူပြီး ကုသိုလ်ယူခဲ့ပါသေးတယ်။ အဖြူရောင်မြန်မာဝတ်စုံလေးနဲ့ ကျက်သရေ ရှိရှိလှနေတဲ့ ဖြူဖြူ့ရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေဟာ အရမ်းကိုကြည့်ကောင်းလွန်းနေပါတယ်။ အိုးကြီးအိုးငယ်တွေနဲ့ ထမင်းဟင်းတွေချက်ပြီး တစ်ရွာလုံးကိုအလှူလုပ်နေခဲ့တဲ့ ဖြူစင်သူ လေးရဲ့ အလှူဟာ တကယ့်ကို ကြည်နူးစရာပါ။ အဆင့်အတန်းမခွဲခြားပဲ လာသမျှလူအားလုံး ကို ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့ ကိုယ်တိုင်ထမင်းတွေခပ်တည့်ပြီး ပီတိဖြာနေတဲ့ သူမရဲ့အပြုံးတွေက ဖြူစင်လွန်းနေပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့မွေးရပ်မြေလေးကိုလည်း အမြဲတမ်းသတိရပြီး ကောင်းကျိုးပြု တတ်တဲ့ ဖြူဖြူထွေးပါပဲ။ အပြုအမူ Read more
ချစ်ရတဲ့ အက်စတာအတွက် ဆေးထိုးဗီဒီယိုလေးတင်ကာ မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးလိုက်တဲ့ အေးမြဖြူ
ပရိသတ်ကြီးရေ… မြန်မာအိုင်ဒေါရဲ့ ပြိုင်ပွဲဟောင်းတွေဖြစ်တဲ့ Winner အက်စတာနဲ့ Runner up အေးမြဖြူတို့ဟာ ချစ်ဖို့ကောင်းပြီး ညီအစ်မအရင်းတွေလို ချစ်ခင်ကြသူတေလို့ ပြောရင် မှားမယ်မထင်ပါဘူးနော်..။ ဒီနေ့ ဖေဖော်ဝါရီလ(၂၀)ရက်နေ့လေးဟာ Winner ဆုရှင် အက်စတာရဲ့ မွေးရက်မြတ်နေ့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်..။ အစ်မလိုခင်ရတဲ့ အက်စတာကို အေးမြဖြူလေးက အရင် ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဆေးထိုးဗီဒီယိုလေးနဲ့အတူ “Happy Birthday to this beautiful girl.. တစ်သက်လုံး စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာစွာနဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေနိုင်ပါစေလို့ သမီးလေးကဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်..။ ပုံရော video ရော ဖုန်းအဟောင်းထဲကပြန်ရှာရလို့ခုမှ Read more
သမီးဖြစ်သူက သွားသေလိုက်လို့ ပြောတာကြောင့် တကယ်သတ်သေသွားတဲ့ ဖခင်
မိသားစုဝင္အခ်င္းခ်င္း စကားမ်ားရန္ျဖစ္ၾကတယ္ဆိုတာ ထူးျခားမွုမရွိပါဘူး။ မိသားစုတိုင္းျဖစ္ေနက်မဟုတ္လား။ ရန္ျဖစ္ေလ ပိုခ်စ္ေလဆိုတဲ့ မိသားစုေတြလဲရွိေသးတာကိုး။ ျဖစ္ၿပီးေတာ့လဲ ၿပီးသြားၾကတာလဲအမွန္ပါ။ အခုျဖစ္ခဲ့တဲ့ျဖစ္ရပ္မွာေတာ့ အေဖနဲ႔သမီးအၾကား ရန္ျဖစ္စကားမ်ားၾကတဲ့ကိစၥဟာ ႏွုတ္ေၾကာင့္ေသ ဆိုတဲ့အေျခအေနအထိဆိုက္ေရာက္သြားခဲ့တာဟာ အင္မတန္စိတ္ထိခိုက္ဖြယ္ရာေကာင္းခဲ့ပါတယ္ ထိုင္းနိုင္ငံက အသက္ ၇၃ ႏွစ္အရြယ္ ဖခင္တစ္ဦးနဲ႔ သူ႔ရဲ့ သမီးျဖစ္သူ ၃ နာရီၾကာတဲ့အထိ စကားေတြမ်ားၿပီး အေခ်အတင္ျဖစ္ခဲ့ၾကပါတယ္ သတင္းေတြအရ ဖခင္ျဖစ္သူဟာ အဲ့ဒီရန္ပြဲမွာ ရန္စကားေတြ အျပန္အလွန္ေျပာဆိုၾကရင္း သမီးျဖစ္သူကေျပာဆိုလိုက္တဲ့ “သြားေသလိုက္” ဆိုတဲ့ စကားေၾကာင့္ စိတ္ထိခိုက္ခဲ့ရၿပီး အဲ့ဒီ့ရန္ုျဖစ္တဲ့ညမွာပဲ နိုင္လြန္ႀကိဳးနဲ႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ႀကိဳးဆြဲခ်သတ္ေသသြားခဲ့တယ္လို့ Read more
ဇာတ်ကားအသစ်မှာ ကိုကြီးနဲ့ညီမလေးရဲ့ချစ်ကြိုးသွယ်ပုံတွေကို ပုံဖော်တင်ဆက်မယ့် ထွန်းကိုကိုနဲ့ချစ်သက်
” ရခဲ့သမျှအရာရာ ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို အတူတူရိုက်ကူးနေတဲ့ ချစ်သက်နဲ့ ထွန်းကိုကိုတို့ နှစ်ယောက်သားရဲ့ ရိုက်ကွင်းပေါ်ကပုံရိပ်လေး တွေကို ချစ်သက်က သူမရဲ့လူမှုကွန်ယက်မှာ ဝေမျှလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားမှာ ကောင်းပြည့်လည်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထား ပြီး စိတ်ဝင်စားစရာ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်မယ့်ပုံပါပဲပရိသတ်ကြီးရေ။ ထွန်းကိုကိုကတော့ ချစ်သက်ရဲ့ငယ်ဘဝမှာ ကိုကြီးအဖြစ်နဲ့ ပါဝင်ခဲ့ပြီး ကောင်းပြည့်ကတော့ ချစ်သက်အရွယ်ရောက်သွားချိန်မှာတွေ့တဲ့ အချစ်သစ် မောင်လေးအဖြစ်နဲ့ အသီးသီး သရုပ်ဆောင်ထားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ နုနေတဲ့ရုပ်ရည်လေးကြောင့် ဘယ်အသက်အရွယ် အပိုင်းအခြားကိုမဆို အလွယ်တကူသရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ ချစ်သက်လေးပါပဲ။ စိတ်ပျိုကိုယ်နုဆိုသလိုပေါ့နော် ပျော်စရာမိသားစုလေးကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အပြင် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သားလေးနဲ့သမီးလေးကြောင့် ဘဝအမောတွေပြေပြီး အခုလို Read more
လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တစ်ပတ်တိတိ ပျောက်ကွယ် နေမယ်ဆိုတဲ့ ဧငြိမ်းဖြူ
ပရိသတ်ကြီးရေ ဧငြိမ်းဖြူကတော့ ဘိုမရုပ်လေးလို ချစ်စရာကောင်းပြီး ကြည်လင်ဝင်းပတဲ့ အသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မော်ဒယ်လ်မင်းသမီးတစ်လက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Cover Dance တွေကကာ မြန်မာရုပ်သံနောက်ခံဇာတ်လမ်းတွဲမှာလည်း ပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်လည်း ပရိသတ်တွေ သတိထားမိလာတာလို့ဆိုရမှာပါ။ လက်ရှိမှာလည်း ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတေါ ရိုက်ကူးနေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူ့အချစ်တော် နိုင်ငံကျော်အဆိုတော်ရဲရင့်အောင်နဲ့ ဘာဘီရုပ်လေးလို လှတဲ့ ဧငြိမ်းဖြူလေး တို့ ဆက်ဆံရေးကတော့ အထူးမိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုပါဘူးနော်။နိုင်ငံကျော်ပြည်သူ့အချစ်တော် အနုပညာရှင်စုံတွဲတွေထဲက ပရိသတ်တွေ Idol Couple အဖြစ်အသတ်မှတ်ခံရတဲ့ အနုပညာရှင်စုံတွဲတစ်တွဲလို့ ဆိုရမှာပါ။ မကြာသေးမီက ဧငြိမ်းဖြူတစ်ယောက် ရဲရင့်အောင်နဲ့ Read more